Unugga Haydarojiin: waa maxay, astaamaha, howlgalka iyo faa'iidooyinka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Markii aan ka hadlayno tamarta mustaqbalka, haydarojiin ahaan shidaal ahaan had iyo jeer maskaxda ayay ku soo dhacdaa. Xaaladdan oo kale, ayaa unugga haydarojiin wuxuu had iyo jeer goobjoog ka ahaa ku dhowaad wadahadal kasta oo la xiriira tamarta la cusboonaysiin karo iyo kala guurka tamarta. Kala guurka tamarta ee aad rabto inaad yareyso cunnada shidaalka, waxaad u baahan tahay dhaqdhaqaaq waara oo magaalada ah. Tani waa halka ay lagama maarmaanka u tahay kala-guurka inuu ku dhaco adoo adeegsanaya bateriga hydrogen, maadaama ay fure u noqon karto gawaarida aan lahayn qiiqa gaaska lagu sii daayo, marka lagu daro qaybaha kale.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato nolosha hydrogen iyo astaamaheeda.
1 Waa maxay baytariga haydarojiin
3 Hawlgalka unugga haydarojiin
5 Faa’iido darrooyinka unugga hydrogen
Waa maxay baytariga haydarojiin
Markaan ka hadlayno baytariga hydrogen waxaan ula jeednaa aalad koronto-yar oo awood u leh inay u rogto tamarta kiimikada ee shidaalka ay keydiso tamar koronto. Shidaalkan la keydiyay si hadhow loogu badalo tamarta korantada waa hydrogen. Sidaa darteed, unugga haydarojiin ayaa loo isticmaali karaa in lagu xoojiyo aalad kasta oo leh astaamahan.
Codsiga ugu ballaadhan ee bateriga hydrogen maanta waa inuu awood u yeesho mootada baabuurka korontada ku shaqeeya, in kasta oo aanu kaligiis ahayn. Ilaa iyo inta unuggu shidaal leeyahay, wuxuu awood u leeyahay inuu keeno tamar, markii uu faaruqana dib ayuu u buuxin karaa.
Waxaan falanqeyneynaa kuwaas oo ah qaybaha ugu muhiimsan unugyada haydarojiin:
Anode: waa qaybta taban ee raso. Waxaa lagu yaqaan magaca cirifka xun waxayna mas'uul ka tahay sameynta elektaroonigyada laga sii daayo haydrogenka si ay ugu adeegsan karaan wareegga korantada dibedda.
Cathode: a waa tiirka saxda ah ee batteriga. Waxay mas'uul ka tahay u qaybinta oksijiinta dusha sare ee qalabka iyo dib u celinta dhammaan elektaroonikada. Waa ku mahadsan tahay hawshan in dib loogu dari karo.
Koronto: waxaa laga sameeyay maaddo loola dhaqmay si ay u fulin karto oo keliya ionyo si togan loo soo oogay. Elektrolytku wuxuu aakhirka xanibi karaa electronka.
Hannaan: Waa shey mas'uul ka ah fududeynta falgalka kiimikada ee u dhexeeya oksijiinta iyo hydrogen. Dareen-celintan ayaa lagama maarmaan u ah inay soo saarto koronto. Waxa ugu caansan waa inay ka samaysan tahay lakab aad u dhuuban oo nanoparticles ah oo ku jira warqadda kaarboon ama maro.
Hawlgalka unugga haydarojiin
Markaan ogaanno astaamaha ugu waaweyn iyo qaybaha unugyada haydarojiin, waxaan arki doonnaa sida ay u shaqeyso. Waxaan ognahay in hydrogen cadaadis la saaray uu unuga ka soo galo dhanka anode. Marka ay haydarojiin gasho waxay ku qasbeysaa gaaskan kansarka cadaadis. Markay molecule-ka hydrogen-ku soo gaadho platinaum, oo qayb ka ah qaybta wax soo saarista, waxay u qaybsan tahay 2 borotoon iyo 2 koronto.
Elektaroonikada waxaa lagu sameeyaa anode-ka wareega wareega. Waa halkan halka ay iyagu mas'uul ka yihiin fulinta hawsha lagama maarmaanka u ah quudinta tamarta waxa la siiyay. Tusaale ahaan, waa loo xilsaari karaa inay awood u siiso matoor koronto. Marka isha tamarta la bixiyo, waxay ku noqdaan batteriga iyagoo maraya qaybta cathode. Markaan joogno cathode-ka, oksijiinta waxay sii dhex martaa qalabka wax soo saarta waxayna sameysmaan labo atam oo oksijiin ah oo si aad ah u diiddan. Qiimahaan taban wuxuu soo jiitaa borotoonka kahor wuxuuna isku daraa labo elektaroonik oo kusoo laabta wareega wareega. Waxyaalahan oo dhami waxay yihiin maaddooyin biyo ah.
Waxaan falanqeyn doonnaa maxay yihiin faa'iidooyinka baytariyada hydrogen ay ku leeyihiin shidaalka kale ee ku saleysan tamarta la cusboonaysiin karo. Sababaha qaar sababta uu shidaalkani uga sareeyo xulashooyinka kale waa kuwan soo socda:
Ma soo saaraan qiiqa wasakheynta: Sidaan aragnay sharaxaadda howlgalka batteriga, hydrogen plus oxygen waxay dhalisaa koronto kadibna uumiga biyaha. Waan ognahay uumiga biyuhu inuu yahay gaas lagu koriyo laakiin aan dhib lahayn. Tani waa sababta oo ah waa gaas dabiici ah.
Waxay ka waxtar badan tahay matoorada gubida: ma aha oo kaliya inay caawiso inaadan wasakheyn, laakiin sidoo kale waxay u beddeleysaa tamarta kiimikada tamarta korantada si wax ku ool ah. Mashiinka gubashadu waa inuu u beddelaa tamarta kiimikada ee shidaalka kuleylka iyo tamartaan farsamo ee awood u leh inuu dhaqaajiyo mishiinka. Tani waxay soo saartaa dhacdo loo yaqaan dhalada kuleylka. Dhacdadani waxay ku kooban tahay beddelka tooska ah ee tamarta ee ay samayso unugga haydarojiin.
Ma laha qaybo dhaqaaqa: La'aanta qaybta taagan waxay ka dhigeysaa mid aad loogu kalsoonaan karo marka loo eego mashiinka gubashada. Mashiinka wax guba waxaa ku jira qaybo badan oo burburi kara.
Haydarojiin waxaa lagu soo saari karaa hab aad u ixtiraam badan oo leh deegaanka- Si ka duwan shidaalka fosil, hydrogen waxaa lagu soo saari karaa hab nadiif ah. Tani waxay gacan ka geysaneysaa sidii looga dhigi lahaa beddel tamar badan oo cagaar ah.
Faa’iido darrooyinka unugga hydrogen
Sida ku dhowaad il kasta oo tamar ah, ha ahaato mid dib loo cusboonaysiin karo iyo haddii kaleba, waxa kale oo jira cillado qaarkood. Waana nooca noocan ah ee tamarta beddelka ahi soo bandhigo taxaddarro taxane ah oo, xilligan la joogo, ka horjoogsanaya inuu ku fido adduunka oo dhan. Aan aragno waxa ay faa'iido darrooyinkani yihiin:
Qiimuhu waa sarreeyaa: In kasta oo haydarojiintu ay aad u badan tahay, haddana waxay ka dhigeysaa mid waxtar u leh qaab batteri ah oo aan dhaqaale ku habboonayn tikniyoolajiyadda hadda jirta.
Waa ololi kara: badbaadada unugyada haydarojiin ayaa wali ah walaac maadaama uu dab qaadi karo waqti kasta.
Way adag tahay in la keydiyo oo la raro: Si ka duwan shidaalka kale sida dhuxusha, way adag tahay in la keydiyo oo la raro.
Haydarojiin waxaa si nadiif ah looga soo saari karaa biyaha, laakiin waa geedi socod tamar-badan. Waqtigaan la joogo, hanaanka ugu dhaqaalaha badan waa in laga soo saaro hydrogen dhuxusha weerarada dabiiciga ah. Sababtaas awgeed, in badan oo haydarojiin ah oo la soo saaro waxay ka yimaadaan shidaalka shidaalka, sidaas darteed looma tixgelin karo inay tahay tamar gebi ahaanba la cusboonaysiin karo.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto batteriga haydarojiin iyo astaamihiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Xakamaynta Hawada